देहव्यापारमा कलिला बालिका : कहालिलाग्दो कथा ! - Hamrokhotang
Home » National » देहव्यापारमा कलिला बालिका : कहालिलाग्दो कथा !
देहव्यापारमा कलिला बालिका : कहालिलाग्दो कथा !
काठमाडौं । अनगिन्ती सपना बोकेर दिनहुँ देशका कुनाकाप्चाबाट थुप्रै मानिस राजधानी पस्छन् । त्यो पंक्तिमा कलिला बालिका र किशोरीको संख्या पनि त्यत्तिकै हुन्छ । औपचारिक शैक्षिक योग्यता र हातमा सीप नभएका थुप्रैलाई काठमाडौं शहरले यस्तो जञ्जालमा पारिदिन्छ, उनीहरू कलिलैमा देह बेचेर गुजारा चलाउन बाध्य हुन्छन् । अनि, विस्तारै पेशेवर यौनकर्मी बन्छन् ।
उनी पेशेवर यौनकर्मी बनेको तीन वर्ष भयो । पहिले पुरानो बसपार्क्तिर बस्थिन् । एक वर्ष जति भयो कलंकीतिर आएको । “रेट फरक हुन्छ, एकजनासँग १५ सय लियो भने रुम भाडा आफैं तिर्छु, आफैं रुम भाडा तिर्ने ग्राहक आयो भने हजार रुपैयाँ लिन्छु” प्राप्ती भन्छिन्, “दिनको चार पाँच हजारसम्म कमाउँछु ।”
गाउँमा हुँदा उनी नजिकैको स्कूलमा पढाउँथिन्, महीनामा रु.७-८ हजार कमाइ हुन्थ्यो । धेरै कमाइ गर्न काठमाडौं आउने हुटहुटी चल्यो । “तर, काठमाडौंमा यस्तो काम पो गर्नुपर्दोरहेछ” सफलले भनिन्, “अब घर फर्केर जाउँ भने भागेर गएकी भन्लान्, यहाँ अरू काम केही पाइन्न, के गर्ने, के ?”
यस्ता किशोरी र बालिकाहरूको संरक्षणका लागि सरकारले ‘श्रमजीवी महिलाहरूमाथि कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण निर्दे्शिका २०६५’ जारी गरेको छ । निर्दे्शिकाको दफा १५ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने गरी एक समिति गठन हुन्छ । त्यसले उनीहरू शोषणमा परे नपरेको निगरानी गर्छ । तर, जिल्लामा प्रजिअ यति धेरै समितिका संयोजक रहन्छन् कि उनलाई यस्ता विषयमा ध्यान दिने फुर्सदै हुँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका शाखा अधिकृत पारसमणि पोखरेल ‘कार्य्विधि बनाउने काम भइरहेको’ भनेर उम्किए ।
(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि लक्ष्मी बस्नेतले तयार पारेको यो समाग्री http://cijnepal.org.np/ बाट साभार गरिएको)